Get Even (FPS, Horror) Game – Game News for Myanmar
Game News for Myanmar
First Person Shooter, Game, Horror, News, PC, PS4, Upcoming
Get Even (FPS, Horror) Game
Date: February 22, 2017Author: Fros0Comments
စိတ္တဇဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ first person shooter အမျိုးအစားဂိမ်း Get Even ….
Get Even ဂိမ်းဟာ ပိုလန်အခြေစိုက် developer ဖြစ်တဲ့ The Farm 51 က ဖန်တီးထားတဲ့ action အမျိုးအစားပါဝင်တဲ့ First Person Shooter Horror အမျိုးအစား ဇာတ်လမ်းသွားဂိမ်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ The Farm 51 ဟာ NecrovisioN franchise နှင့် နောက်ဆုံးထွက် Painkiller စီးရီးတွေ ကြောင့် လူသိများပါတယ် ။
စွန့်ပစ်ထားတဲ စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ရုံထဲ မေ့မျောရာကနေ နိုးထလာတဲ့ Cole Black ဆိုတဲ့ အငှါး သေနတ်သမားတစ်ယောက် နေရာကနေ ဆော့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Black ဟာ သူ နိုးထလာတဲ့အချိန် သူ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲ ဘာမှ မရှိ ။ အမည်ဝှက် Red ဆိုတဲ့သူရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ black ဟာ ဗုံးတွေ ချိတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်မယ်ဆိုတာပဲ သူ့ခေါင်းထဲ ရှိပါတယ် ။ Black က သာမာန်လူ မဟုတ် ။ ထူးဆန်းတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာက သူဦးနှောက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ။ ဒီအရာက သူ့ကို ဘယ်အချိန်မဆို မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်ခေါ် ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးတယ် ။ ဘာကြောင့် သူ ဒီကို ရောက်နေတာလဲ? မိန်းကလေးကရော ဘယ်သူလဲ? အခုရောက်နေတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိရဖို့ black ဟာ သူ့အရင်က မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်ဖော်ရပါတော့တယ် ။ cutsense တွေ dialogue တွေ ကြည့်ခြင်း ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ဇာတ်လိုက်အကြောင်း သိလာရမှာ ဖြစ်သလို ဂိမ်းထဲ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၊ လူတွေကို မေးမြန်းစကားပြောခြင်းအားဖြင့် ကစားရင်း ဇာတ်လမ်းအကြောင်း တဖြည်းဖြည်း သိလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Get Even ဂိမ်းရဲ့ graphic ဟာ unreal engine အသုံးပြုထားကာ အခုခေတ်နည်းပညာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလည်း အပြင်က တကယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အစစ်မျိုးဖြစ်အောင် ၊ လူဆိုလည်း တကယ့်လူအစစ်မျိုး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာကြောင့် ကစားတဲ့အခါ တကယ့် ကမ္ဘာငယ်လေးထဲ ကိုယ်တိုင် ရောက်နေသလိုမျိုး ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Get Even ဂိမ်းမှာ single player mode သာမက multiplayer mode ပါ ပါရှိပါတယ် ။ သူ့ multiplayer mode က ထူးခြားပါတယ် ။ single player mode နဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကစားနေတဲ့အချိန်မှာ နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်အချိန်မဆို ဝင်ပြီး ကစားရတဲ့ multiplayer mode ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ယောက်တည်း ကစားတဲ့အချိန်မှာ ဇာတ်လိုက်ရဲ့ ရန်သူတွေကို computer က ထိန်းချုပ်နေပေမယ့် နောက်တစ်ယောက် ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီ 2nd player ဖြစ်တဲ့ နောက်တစ်ယောက် က ရန်သူတွေရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဇာတ်လိုက်ရဲ့ ရန်သူက ဝင်လာတဲ့ 2nd player ဖြစ်သွားပြီး အဲဒီ 2nd player က ဇာတ်လိုက်ရဲ့ အလုပ်တွေကို ဝင်ရောက် နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးရမှာ ဖြစ်သလို ဇာတ်လိုက်နေရာက ကစားသူအနေနဲ့ သူကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရန်သူဟာ computer က ထိန်းချူပ်ထားတာလား ဒါမှမဟုတ် နောက်ဝင်လာတဲ့ ကစားသူကပဲ ထိန်းချုပ်ထားတာလားဆိုတာ သိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
Get Even ဂိမ်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးရရှိနေခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Get Even ဂိမ်းဟာ PlayStation 4, Xbox One, နှင့် PC အတွက် လာမယ့် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဥရောပမှာ ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း publisher Bandai Namco နှင့် developer The Farm 51 က ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြောက်အမေရိကမှာတော့ digital အနေနဲ့ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ထွက်မယ့်ရက်တော့ အတိအကျ မသိရသေးပါ ။
Steam Link => http://store.steampowered.com/app/299950/
စိတ်တဇဆနျဆနျ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့ first person shooter အမြိုးအစားဂိမျး Get Even
Get Even ဂိမျးဟာ ပိုလနျအ​ခွစေိုကျdeveloper ဖွဈတဲ့ The Farm 51 က ဖနျတီးထားတဲ့ action အမြိုးအစားပါဝငျတဲ့ First Person Shooter Horror အမြိုးအစား ဇာတျလမျးသှားဂိမျး တဈခု ဖွဈပါတယျ ။ The Farm 51 ဟာ NecrovisioN franchise နှငျ့ နောကျဆုံးထှကျ Painkiller စီးရီးတှေ ကွောငျ့ လူသိမြားပါတယျ ။
စှနျ့ပဈထားတဲ စိတ်တဇ ဆေးရုံတဈရုံထဲ မမြေ့ောရာကနေ နိုးထလာတဲ့ Cole Black ဆိုတဲ့ အငှါး သနေတျသမားတဈယောကျ နရောကနေ ဆော့ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ Black ဟာ သူ နိုးထလာတဲ့အခြိနျ သူ့ မှတျဉာဏျထဲ ဘာမှ မရှိ ။ အမညျဝှကျ Red ဆိုတဲ့သူရဲ့ လမျးညှနျမှုနဲ့ လှုပျရှားနရေတဲ့ black ဟာ ဗုံးတှေ ခြိတျထားတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ကယျတငျမယျဆိုတာပဲ သူ့ခေါငျးထဲ ရှိပါတယျ ။ Black က သာမာနျလူ မဟုတျ ။ ထူးဆနျးတဲ့ နညျးပညာနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ အရာက သူဦးနှောကျနှငျ့ ပေါငျးစပျထားပါတယျ ။ ဒီအရာက သူ့ကို ဘယျအခြိနျမဆို မှတျဉာဏျကို ပွနျချေါ ပွနျဖတျလို့ရအောငျ ပွုလုပျပေးတယျ ။ ဘာကွောငျ့ သူ ဒီကို ရောကျနတောလဲ? မိနျးကလေးကရော ဘယျသူလဲ? အခုရောကျနတေဲ့ အဖွဈမှနျကို သိရဖို့ black ဟာ သူ့အရငျက မှတျဉာဏျကို ပွနျဖျောရပါတော့တယျ ။ cutsense တှေ dialogue တှေ ကွညျ့ခွငျး ဖတျခွငျးအားဖွငျ့ ဇာတျလိုကျအကွောငျး သိလာရမှာ ဖွဈသလို ဂိမျးထဲ ပတျဝနျးကငျြတှကေို စူးစမျးလလေ့ာခွငျးအားဖွငျ့ ၊ လူတှကေို မေးမွနျးစကားပွောခွငျးအားဖွငျ့ ကစားရငျး ဇာတျလမျးအကွောငျး တဖွညျးဖွညျး သိလာရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ Get Even ဂိမျးရဲ့ graphic ဟာ unreal engine အသုံးပွုထားကာ အခုခတျေနညျးပညာနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြဆိုလညျး အပွငျက တကယျ့ ပတျဝနျးကငျြအစဈမြိုးဖွဈအောငျ ၊ လူဆိုလညျး တကယျ့လူအစဈမြိုး ဖွဈအောငျ ဖနျတီးထားတာကွောငျ့ ကစားတဲ့အခါ တကယျ့ ကမ်ဘာငယျလေးထဲ ကိုယျတိုငျ ရောကျနသေလိုမြိုး ခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Get Even ဂိမျးမှာ single player mode သာမက multiplayer mode ပါ ပါရှိပါတယျ ။ သူ့ multiplayer mode က ထူးခွားပါတယျ ။ single player mode နဲ့ တဈယောကျတညျး ကစားနတေဲ့အခြိနျမှာ နောကျတဈယောကျက ဘယျအခြိနျမဆို ဝငျပွီး ကစားရတဲ့ multiplayer mode ဖွဈပါတယျ ။ တဈယောကျတညျး ကစားတဲ့အခြိနျမှာ ဇာတျလိုကျရဲ့ ရနျသူတှကေို computer က ထိနျးခြုပျနပေမေယျ့ နောကျတဈယောကျ ဝငျလာတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီ 2nd player ဖွဈတဲ့ နောကျတဈယောကျ က ရနျသူတှရေဲ့ နရောကို အစားထိုးဝငျရောကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဇာတျလိုကျရဲ့ ရနျသူက ဝငျလာတဲ့ 2nd player ဖွဈသှားပွီး အဲဒီ 2nd player က ဇာတျလိုကျရဲ့ အလုပျတှကေို ဝငျရောကျ နှောငျ့ယှကျ ဖကျြဆီးရမှာ ဖွဈသလို ဇာတျလိုကျနရောက ကစားသူအနနေဲ့ သူကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ရနျသူဟာ computer က ထိနျးခြူပျထားတာလား ဒါမှမဟုတျ နောကျဝငျလာတဲ့ ကစားသူကပဲ ထိနျးခြုပျထားတာလားဆိုတာ သိရမှာ မဟုတျပါဘူး ။
Get Even ဂိမျးဟာ ၂၀၁၃ ခုနှဈကတညျးက စတငျ ကွညောခဲ့ပွီးနောကျ လူအမြား စိတျဝငျစားမှု အမြားဆုံးရရှိနခေဲ့တဲ့ ဂိမျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ ။ Get Even ဂိမျးဟာ PlayStation 4, Xbox One, နှငျ့ PC အတှကျ လာမယျ့ မလေ ၂၆ ရကျနတှေ့ငျ ဥရောပမှာ ထှကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈကွောငျး publisher Bandai Namco နှငျ့ developer The Farm 51 က ကွညောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ ။ မွောကျအမရေိကမှာတော့ digital အနနေဲ့ ထှကျလာမှာ ဖွဈပွီး ထှကျမယျ့ရကျတော့ အတိအကြ မသိရသေးပါ ။
Published by Fros
My hobby is gaming and writing. I translate about latest games and news so that many people can know and can choose easily what they really want. Sometimes, I write game reviews, guides and general knowledge about some games.	View all posts by Fros
Previous Previous post: ​Psycho-Pass: Mandatory Happiness
Next Next post: ​Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ PS4နှင့် PC အတွက် မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မြောက်အမေရိကတွင်လည်းကောင်း ၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဥရောပတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ထွက်ရှိလာတော့မည်
Apex Legends ဂိမ်း ထွက်ပြီး ၈ နာရီအကြာမှာ ကစားသူ player ၁ သန်းကျော်ထိရှိလာ
Louis Vuitton ရဲ့ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Lightning
ထွက်ရှိလာတော့မည့် အလန်းစား ဂိမ်းများ
Third person (12)
Follow Game News for Myanmar on WordPress.com
© 2019 Game News for Myanmar